'फेमिनिस्ट'ले जहिल्यै डरविरुद्ध लड्नुपर्छ
सुजान अस्टिन अन्तर्वार्ता: साकी कोबायाकी/अनुवाद: सुरज सुवेदी
लगभग आधा शताब्दी लामो थिएटर करियर तथा १० वटा फिचर फिल्मको अनुभव बोकेकी सुजान स्वीडिस फिल्म र रंगमञ्च जगतकी सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाहरूमध्ये पर्छिन्। उनले दुई वर्षसम्म स्वीडिस फिल्म उद्योगअन्तर्गतका कलात्मक बाल फिल्महरूको सद्भावना दूत भएर पनि काम गरिन्। पछिल्लो समय चर्चित रहेको र विभिन्न विवादमा परिरहेको उनको फिल्म 'दि गर्ल दि मदर एण्ड दि डेमोन्स' ले उनको 'बोल्डनेस'ले केवल एउटा सफल संयोगान्त कथा मात्र दिँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। तर यो सँगसँगै एउटा पुरुषप्रधान समाजमा रहेर निरन्तर रूपमा थिएटर र फिल्मको साधनमा लाग्नु उनको लागि कम चुनौतिपूर्ण भने छैन। यो समाजलाई निकै जटिल रूपमा देख्ने उनी भन्छिन्, ‘फेमिनिस्टले जहिल्यै डरविरुद्ध लड्नुपर्छ तर एउटा कलात्मक भिजनले भने पुरै उद्योगको मूलप्रवाहलाई नै चुनौती दिन सक्छ।’
'सिनेमा स्क्यान्डिनाभिया'ले उनको करियर र स्वीडिस फिल्म उद्योगको बारेमा गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
मेरी आमा गर्ड अस्टिन ४० को दशकको स्वीडिस फिल्म उद्योगकी चर्चित समालोचक हुनुहुन्थ्यो। इङमर बर्गम्यानकी साथी उनलाई नयाँ फिल्महरूको भिजन लेख्दाताका 'स्क्रिप्ट गर्ल' भनेर पनि चिनिन्थ्यो। उनकै छोरी भएकाले पनि मैले फिल्म क्षेत्रमै करियर रोज्छु भन्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। तर थिएटरभन्दा धेरै खुल्ला संसार भए पनि मलाई फिल्म क्षेत्रमा आउन समय लाग्यो। चाहेकी भए १९ वर्षकै उमेरमा पनि छिर्न सक्थेँ। किनकि, मेरो पहिलो फिल्म बनाउने खर्च जुटाउनका लागि नै धेरै समय लाग्यो। त्यो बेला कमेडी तथा पुरातनवादी फिल्महरू चल्थे/बनाइन्थे। मैले सोचेको र बनाउन चाहेको जस्तो एक महिला मुख्य विषय भएका बौद्धिक फिल्महरू बनाउने हिम्मत कसैसँग थिएन। त्यसपछि मैले एकजना राम्रा निर्माता भेटेँ। उनी मैले सोचेको जस्तै विषयका फिल्ममा विश्वास गर्थे। किनकि उनकी श्रीमतीलाई त्यो समय महिला निर्देशक आउने बेला भइसकेको जस्तो लागेको थियो। उनले मलाई अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयमा एउटा फिल्म कोर्स लिन पठाए। एकदमै राम्रो शिक्षकसँग मैले मेरो स्क्रिप्टका बारेमा लामो कुरा गरेँ। उनले मलाई केही नियमहरू सिकाए र ती नियमहरू तोड्ने कि नतोड्ने भन्ने मलाई छोडिदिए। मैले स्क्रिप्टको आठवटा भर्सन लेखेँ तर १९८२ मा फिल्म बनाउँदा पहिलो भर्सन नै प्रयोग गरेँ।
मलाई लाग्दैन कि चर्चित 'फेमिनिस्ट' भएर मलाई केही सहयोग भएको होस्। यो १९८० को दशक थियो र सबैजना फेमिनिस्टहरू डराइरहेका थिए। त्यसबेला धेरै नकारात्मक हल्ला तथा विचारहरू सुनिन थालेका थिए। सामाजिक मुद्धाहरूमा छलफल र तर्क गरिरहने महिलालाई कुनै कलात्मक दाबी निर्माण गरेर हस्तक्षेप गर्नु मुस्किल थियो। धन्न! अहिले मैले धेरै महिला निर्माताहरू तथा नेटवर्क देखिरहेको छु। हामीसँग अफिसियल नीति पनि छ र सरकार तथा अन्य संस्थाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्।
जब मैले 'गार्डियन एन्जल' बनाएँ, पोल्याण्डका फिल्म तथा टिभी निर्देशक अगनिस्का होलाण्डले भनेका थिए कि मैले पेरिस जानुपर्छ र फिल्म बनाउनुपर्छ किनकि, त्यहाँ धेरै दाता पाउन सकिन्छ। त्यसबेला म थिएटरमा व्यस्त थिएँ त्यसैले त्यो प्रस्ताव नकारेँ।
विभिन्न देशहरूको फरक-फरक मौसम र अवस्थितीमा अनुभव गरिएका फिल्महरू उनलाई मन पर्छन्। स्वीडेनको फिल्म उद्योगले उनीप्रति देखाउने व्यवहारलाई सङ्केत गर्दै उनी भन्छिन्, ‘म अलिक वेवास्ता गरिएकी फिल्म मेकर हुँ तर यसको मतलब मेरा फिल्महरू नराम्रा हुन् भन्ने हैन। यत्ति हो, मैले मूलप्रवाहमा बग्ने फिल्महरू बनाइन। मैले जहिल्यै अभान्ट गार्डिस्ट र फेमिनिस्ट फिल्महरू बनाँए र यो नवउदारवादी संस्कृतिका लागि उचित संयोजन हैन। उनीहरू मन पराउँदैनन्। केही मानिसहरूलाई त मेरो फिल्म कसरी हेर्ने वा बुझ्ने भन्ने पनि थाहा छैन।'
उनको पहिलो फिल्म 'मामा' खासै सफल भएन तर दोस्रो फिल्म 'दि मोचार्ट ब्रदर्स' सफल ओपेरा कमेडी सावित भयो। त्यसपछि सबैले सुनेको विषयमा 'लिथल फिल्म' र श्यामश्वेत राजनैतिक विषयमा 'दि गार्डियन एन्जल' आए। 'स्पिक अप इट्स सो डार्क' ले एउटा यहुदी मनोविज्ञ र नाजीबीचको संवादलाई पस्केको छ। ती सबै फिल्महरूले अस्टिनको कलात्मक महत्वाकांक्षा र भिजनलाई प्रस्तुत गरेको थियो। ती फिल्महरू दुई दशकपछि पनि उत्तिकै प्रभावशाली छन्। उनी भन्छिन्, ‘यदि अहिले कसैले ती फिल्महरू हेर्यो भने ती सुपर मोर्डन लाग्छन्।’
‘समयभन्दा चाँडो फिल्म बनाउने निर्देशक’ भनेर चिनिने उनका फिल्मको यथार्थले अहिले पनि स्क्यान्डिनेभिया भन्दा बाहिर भएका महिलाहरूमा राम्रो प्रभाव छोडेका छन्। मामाको उदाहरण हेरौं, त्यसलाई गएको वर्ष बेइजिङमा देखाइएको थियो। हेरेर त्यहाँका महिला दर्शकहरू रोएका थिए। सुजान थप्छिन्, ‘उनीहरू रोए, किनकि चीन त्यसबेलामा त्यस्तै थियो। रुने महिलाहरूलाई त्यसबेला पनि बच्चा भएपछि पुरुषहरूबाट पैसा लिन सक्ने अधिकार थिएन। मैले फिल्ममा त्यस्तो चिजहरू देखाएको थिएँ जसलाई हेरेर त्यहाँका महिलाहरूले ‘मैले त्यो दृश्यमा आफूलाई भेटेँ’ भने। यो किन भयो भने फिल्म असामान्य रूपमा वास्तविक थियो। र, मलाई पनि त्यस्तो होला भन्ने लागेको थिएन। त्यसैले पनि ‘स्वीडेनको समाज फरक छ’ भनेको हुँ।'
अहिले कुनै राजनैतिक मुद्दाहरू छन्, जसलाई तपाईं 'ट्याकल' गर्न चाहनुहुन्छ?
म अहिले इङमर बर्गम्यानको स्क्रिप्ट '६४ मिनट्स विथ रेब' मा काम गरिरहेको छु। मैले यसलाई त्यो सन्दर्भमा राखेको छु, जहाँ फेमिनिज्म सुरु हुन्छ र विस्फोट हुने गरी स्थापित हुन्छ। यो स्वतन्त्रताको बारेमा बन्ने फिल्म हुनेछ र त्यस्तो महिलाको कथा भन्नेछ, जसले स्वतन्त्रता त खोजिरहेकै छे तर कसरी खोज्ने वा पाउने भन्ने बारेमा थाहा छैन। मुख्य पात्र एक युवती हुन्, जो कान सुन्न सक्दिनन्। उनको स्वतन्त्रताको लडाइँले मेरो मुटु छोएको छ। हामीले युवाको रचनात्मकतालाई सहयोग गर्नुपर्छ, किनकि त्यसो गरेनौं भने हाम्रो कुनै भविष्य छैन।
उदाहरणको लागि, उनले 'सेम' बनाए जुन धेरै उत्कृष्ट फिल्म थियो। अर्को 'प्यासन अफ आना' पनि उत्तिकै प्रभावशाली छ। उनको समयमा उनी खुला दिमागका थिए तर बुढेसकाल हुँदै गएपछि धेरै पुरातनवादी हुँदै गए र अरू नै विषयहरू छान्न थाले।
'ब्याङ्बुलन' तथा 'दि गर्ल दि मदर एण्ड दि डेमोन' बनाउँदा तपाईंको दृष्टिकोण कस्तो थियो?
मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। म बाल फिल्महरूका लागि दुई वर्ष सद्भावना दूत पनि भएको थिएँ। त्यसबेला धेरैतिर घुमेँ तथा बालबालिकाहरूसँग कुराकानी गरेँ। जब मैले एक ११ वर्षको बालकलाई फिल्मको उपयुक्त रेटिङ कति हो भनेर सोधेँ, थाहा पाएँ उनीहरूले धेरै खराब फिल्महरू देखिसकेका छन्। र, मैले आमाबुवालाई पनि प्रदर्शनमा लैजान्छौं भनेर सोध्दा उनीहरूले 'नो' भन्दै कराए। त्यसरी कराउनुको कारण यौनिक विषय थियो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १७, २०७४, ०७:१५:४२